Fodya wrapping zvinhu
mashanga wrapping bepa
REVODE105 ari dzakachinjwa pla imwe mhando iro zvakananga akagadzirirwa segirazi straws.
Properties kuti REVODE105
Pla nebwe REVODE105 Testing nzira
Density (g / cm3) 1.25 ± 0,05 GB / T1033-1986
Akanyauka kuyerera zvazvingava (g / 10min, 190 ℃ / 2.16Kg) 3-8 GB / T3682-2000
Heat kusarurama tembiricha (℃) 60
Richigadzirisa shrinkage zvazvingava (yakafanana uchanyangadika aibuda mirayiridzo) 0,005 ISO294-4: 2001
Kuumbwa shrinkage (hunyambiri uchanyangadika aibuda mirayiridzo) 0,003 ISO294-4: 2001
Tensile simba (Mpa) 45-60 GB / T1040-2006
Elongation pa zororo (%) ≥ 10 GB / T1040-2006
Impact simba (KJ / m2, Izod) 3 GB / T1043-2008
The pla nebwe REVODE105 zvakakodzera kubudiswa vasiri nokupisa nemishonga uye yakajeka ngaatarire straws, kwete yakakodzera curved straws.
The REVODE105 nebwe inogona kupatsanurwa pane chinyakare polypropylene (PP) mashanga extrusion Kuumbwa muchina. Kana processing, tapota ona:
I: The kubudiswa tembiricha (tembiricha chaiyo inofanira optimized):
Kupisa chikamu chokutanga (pedyo inosimbisa huro): 130-150 ℃, dzimwe zvikamu: 160-180 ℃ pla nebwe REVODE105 anotanga kubvunda panguva tembiricha pamusoro 60 ℃, pakuparwa kukwirira tembiricha iri dzichifura pahuro kunotungamirira nebwe agglomeration uye unsmooth kudyisa, Zvinokurudzirwa kudira kutonhora mvura bhachi pakudyisa huro muchikamu.
Nekuti REVODE105 zvikuru pfava pane chinyakare PP nebwe, mativi anogona kutyora kana kucheka nenyere. Zvinokurudzirwa kudzora mvura tembiricha mumvura tangi pakati 35 uye 40 ℃, nechokwadi mutopota aine tembiricha kana kucheka, todzivisa nyore Cracking.
II: Color kubatane nekuita
Kana chigadzirwa anofanira mavara, iva nechokwadi kuti kushandisa ruvara toner kana pla anotsanangura ruvara tenzi batch mangé. Usava toner kana ruvara tenzi batch mangé kungaita kuti pfava chigadzirwa, unsmooth chigadzirwa nomumativi kunyange asingakwanisi extrude.
Kana ruvara kubatane nekuita zvinhu hazvigoni kushandiswa mukati 2 maawa, Zvinokurudzirwa kushandisa 25 makirogiramu / bhegi nebwe zvose kamwechete, panzvimbo, kushandisa hafu unamire neimwe hafu rinopisa chisimbiso mudziyo pakarepo. Chinangwa ndechokuti kufumura zvinhu kuti mhepo sezvo pfupi sezvinobvira.
REVODE105 rave kupatsanurwa nokuda kupwa crystallization, uye mwando zviri zvishoma than400 ppm. The nebwe kuti inochengetwa Aluminum foil hombodo, kudzivirirwa bhokisi kana bhegi kunze chinogona kushandiswa zvakananga. Chengeta pasuru akanamwa kusvikira vakagadzirira kushandisa uye kukurumidza reseal chero tsva zvinhu, kana nebwe kuchaita yokufungisisa unyoro. Pashure pane kuti nebwe anogona kuuya yakawedzerwa mufambo panguva kwacho, uye zvigadzirwa angava pfava pfuma, pemvura shrinkage. Kana nebwe pachena mumhepo kuti awa kupfuura rimwe, zvinofanira kuzodzosera kuomeswa asati kushandisa, zvikasadaro, kuti nebwe inogona kushandiswa zvakananga. Mukana rokutora kuti mwando haigoni kunze, kana nebwe pachena mumhepo dzakakwirira unyoro.
Apo kuzodzosera kuomesa nebwe, UN-dehumidified inopisa mhepo chinorambidzwa, nokuti pasina dehumidifier, kwete chete kuomesa mugumisiro hazvigoni kuwanwa, asi kumhanya mvura absorbance pamusoro pla nebwe zvinogona nokukurumidza. The dehumidified mhepo anogona kuvimbisa kuomesa mugumisiro pla nebwe riri desiccator. Kana kushandisa mukuru muchoto, kuti dehumidification midziyo rinofanira kushandiswa dehumidify mhepo iri oven.SD-H akatevedzana wouchi-engoro-mhando dehumidifiers yaipiwa ne Shini pla stics Technologies Inc. vari varumbidzwa zvakasimba nokuda pla nokuomesa, dzimwe equipments pamwe chete dehumidified nomugumisiroi zvinogonawo kusarudzwa.
Typical kuomesa zvinhu zviri kuratidzwa tafura pazasi:
kuomesa Parameter Typical Settings
Residence Time (maawa) 2-3
Air Temperature (℃) 80 (Temperature pamusoro dzose hovhoni)
Air Dew Point (℃) -40 (Temperature kuti dehumidifier)
Air Kuyerera Rate (m3 / hr-makirogiramu nebwe) > 1,85
Ugopfiga kanganisa mujinga pasi Hopper uye ndokunatsa Upfu kana wavhara pasi muchina nguva pfupi (mukati 30 min), kudzivisa ichivharira yacho inosimbisa huro. Vhurai kanganisa uye kufudza nebwe pashure pokusimbisa kuzodzosera kutanga jekiseni.
Kana ruvara changed uye decomposing zvakaitika panguva richigadzirisa chichiitwa, ndokunatsa Upfu pakarepo kuchengeta mamiriro acho. Rambai kumhanya kana acho romuzvarirwo, kana kuchinja parameters.
Recovery Mabatirwo renewable nezvinhu:
The sakodzera zvigadzirwa anogadzirwa revode105 kugadzirwa muitiro inogona kupatsanurwa uye kupatsanurwa pamwe itsva materials.The inorwara Kuwedzera hakufaniri kunyanya guru, zvikasadaro chigadzirwa uchakomborerwawo haungatani kuputsika.
The zvishandiswezve zvinhu zvinogona kurapwa nenzira dzinotevera mbiri:
Mukuita okuwana, zviri zvakananga comminuted uye aitaura kuti Hopper pachishandiswa otomatiki feeding.The zvinhu itsva yakavhenganiswa kushandiswa, asi vanofanira kuva nechokwadi kuti bhaketi tembiricha haasi kupfuura 60 madhigirii, zvimwe pangava Sticky zvinhu ( Recommended kwadzinoita kushandiswa)
Next: 60gsm White Kraft Paper Roll For Paper uswa
Automatic munongoro kurongedza Machine
mhoni chisimbiso kurongedza Machine
kutsenga chingamu Packaging
Ear Cleaning Stick Cotton Bud
zvisina kusimba Label
retisi Apex Machine
Makeup Cotton Buds
Rakasonererwa Mupiro Apex Machine Price
Pla Resin For jekiseni Grade
Pla Resin In High kusimba
Plastic Stick Cotton Swab
mapeji dzakarukwa Fabric
Raw Wood Pulp kabhodhi Gray
Single munongoro kurongedza Machine
sepfarivari plugs kavha Machine
Wholesale Customized Printing
Wooden Plastic Stick Cotton Swab